नेपाल आज | भात खुवाइको भोज खाँदा ४१ बिरामी, गम्भीर तीनजनालाई काठमाडौं 'रिफर'
भात खुवाइको भोज खाँदा ४१ बिरामी, गम्भीर तीनजनालाई काठमाडौं 'रिफर'
'माछा खाएका स्थानीयवासी मात्रै बिरामी'
आइतबार, १५ असार २०७६ गते प्रकाशित - नेपालआज समाचारदाता
दमौली । तनहुँको भानु नगरपालिका–तीन खहरे निवासी धनराज श्रेष्ठको छोराको भात खुवाइमा भोज खाएका ४१ गाउँले बिरामी परेका छन् । श्रेष्ठको छोराको भात खुवाइको अवसरमा बिहीबार आयोजित भोजमा सहभागी भएका गाउँले शनिबार एकैपटक बिरामी परेका हुन् ।
स्थानीयवासीले भोजमा माछा, कुखुराको मासु, केराउको तरकारी, सलादलगायत खाएका थिए । माछा खाएका गाउँले बिरामी परेको भानु नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष दलनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । 'अन्य खानेकुरा खाएका स्थानीयवासीलाई केही असर छैन,' श्रेष्ठले भने, 'माछा खाएका स्थानीयवासी मात्रै बिरामी परेका छन् ।'
बिरामी परेका स्थानीयवासीलाई झाडापखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने लक्षण देखापरेको छ । बिरामीमध्ये तीनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ भने अन्य बिरामीको डुम्रेस्थित लक्ष्मी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
माछा खाएका स्थानीयवासी मात्रै बिरामी परेकाले माछाको असर देखिएको हुनसक्ने इलाका प्रहरी कार्यालय भानु मुकाम डुम्रेका प्रहरी निरीक्षक नीरज डाँगीले जानकारी दिए । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तनहुँका प्रमुख शिवजी बरालले डुम्रे बजारको एक पसलबाट माछा खरीद गरी लगिएको र माछाको विषादीका कारण स्थानीयवासी बिरामी परेको हुनसक्ने बताए । उनले भने, 'घटनास्थल पुगेर खानेपानी, माछाको परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गरेका छौँ ।'
बिरामी भात खुवाइ
विवाहितको तुलनामा अविवाहितहरुमा हृदयघात हुने सम्भावना बढी !
विपन्नलाई प्रलोभनमा पारेर मिर्गौला प्रत्यारोपण !
कुन ब्लड ग्रुप भएकाले के खाने ? के नखाने ? जान्नुहोस
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको सफ्टवेयर ह्याक